क्रान्तिपछिको गेरुवा तमासा ~ Thinksphere
उज्ज्वल प्रसाई /
वैशाख १३, २०७६/
काठमाडौँ — नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएको औपचारिक घोषणा भएसँगै धार्मिक ‘बाबागिरी’ सुरु भएको छ । काठमाडौंमा ठूलो तामझामसहित ‘ॐ आदिमणि मन्त्र महायज्ञ महाअनुष्ठान’ को आयोजना गरियो । शारीरिक समस्या लिएर जन्मेका आठवर्षे बालक आदित्य दाहाल सो महायज्ञमा जगद्गुरुका रूपमा विराजमान गराइए ।
पहिल्यै गुगल ब्वाईका नामले प्रचारित बालकले गरेका तिलस्मी कामका फेहरिस्तको चर्चा गरेर महायज्ञको उपादेयता पुष्टि गरियो ।
अद्भुत शक्ति भएका, आफ्नो मन्दिरको इन्जिनियरिङ आफै गर्ने, ध्यान–योगका नयाँ विधि पत्तो लगाउने, दसौँ दिनसम्म निराहार ध्यान बस्ने जस्ता आदित्य–महिमा प्रकाशित भए । त्यतिले नपुगेर नाम चलेका मेडिकल डाक्टर र योगीमार्फत उनका कीर्ति र तिलस्मको वृत्तान्त रचियो । रोचक के भने, हरेक फूलबुट्टे वृत्तान्तमा ‘गुरु आदित्य प्रचार रुचाउँदैनन्’ भनियो !
औपचारिक दस्तावेज र वक्तव्यमा मार्क्सवादी दर्शनलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका ‘कमरेड’हरू सो महायज्ञ सफल बनाउन दत्तचित्त थिए । उनै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीहरू बालक दाहालका नाममा प्रतिपादित धार्मिक सिद्धान्तका अब्बल प्रचारक देखिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सगर्व प्रकट गरेको आदित्यभक्ति राजनीतिक सत्ता र वामपन्थी सरकारको सोझो संलग्नता देखाउन काफी छ । आदित्यलाई गुगल ब्वाई हुँदै जगद्गुरु बनाएर महायज्ञको आयोजनसम्म पुर्‍याउनमा‘डेमोक्र्याट’ र ‘कम्युनिस्ट’ दुवै संलग्न रहे । स्वास्थ्य उपचार गराउन कसैले पनि विदेश जानु नपर्ने ठूलो दाबीसहित खोलिएको एउटा कर्पोरेट अस्पताल सो महायज्ञको मुख्य प्रायोजक रहेको त सडकमा ठडिएको प्रत्येक गेरुवा गेटमा प्रस्ट देखिन्थ्यो !
राजनीतिक, व्यापारिक र नागरिक एलिटहरूको सामूहिक प्रयत्नबिना आदिमणि मन्त्र महायज्ञ सफल हुने थिएन । आधारभूत तहका सामान्य जनताले आफूले आस्था राख्ने कुनै निराकार दैवीशक्ति वा प्रकृतिको पूजा गर्ने अनुष्ठान होइन, आदिमणि महायज्ञ ।
उपलब्ध औषधीले निको नभएपछि दिक्दार अभिभावकले बिरामी बच्चा बोकेर भाकल गरे जस्तो पनि होइन, यो यज्ञ । प्रचार संयन्त्रमा प्रभावकारी पहुँच, राजनीतिक सत्ता र सरकारको बलियो आड एवं धनको प्रत्यक्ष लगानीमार्फत रचिएको गेरुवा तमासा हो यो । सम्भवतः आधारभूत जनताको धार्मिक आस्थाको दोहन गर्ने मनसुवासहित यो तामझाम रचिएको हो ।
सक्ता, शत्ति र बजारको सम्मिश्रणमा प्रदर्शित तमासा सम्बन्धी सूचना अपेक्षित रूपमा बाहिर आएन । बरु सूचनाको खेती गर्ने पत्रिका, सम्पादक र पत्रकारहरू नै आदित्य–महिमा रचिदिने लेखनदास भए । तिनले प्रश्न सोधेनन्, सन्देह गरेनन्, महायज्ञको उद्देश्य खोतलेनन्, व्यापारी र राजनीतिक एलिट किन यस महायज्ञका आयोजक बने भन्ने अति सामान्य चासोसम्म राखेनन् । अर्थात् तिनले गर्नैपर्ने सामान्य भूमिका पनि निर्वाह गरेनन् । सत्ता, बजार र धर्मको घातक सम्बन्ध उजागर गर्नु तिनको चाहना थिएन, त्यसैले तिनको सामर्थ्यको प्रश्न असान्दर्भिक बन्यो ।
आधुनिक राज्यका आवश्यक अंगका रूपमा अस्तित्वमा रहेको दलीय राजनीतिको धरातल अध्यात्म होइन । जनचासोको हरेक विषयमा सूचना प्रसार गर्ने उद्यमको जिम्मा लिएको पत्रकारिताको जग तिलस्म हुन सक्दैन । नाफादेखि नाफासम्मको म्याराथनमा व्यस्त रहने व्यापारीले आध्यात्मिक आनन्दका लागि गेरुवा तमासा रच्दैन ।
त्यसैले यी तीन थरी बिलकुल भौतिकवादी धरातलमा उभिएका संस्था र व्यक्तिले देखाएको तिलस्म र अध्यात्मप्रतिको लगाव शंकास्पद छ । अन्तर्य उधिनेर हेर्नसके, यो गठजोड सिंगो समाजका लागि खतरनाक सावित हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ ।
भारतीय समाजमा अनेक बाबाको प्रताप र प्रभाव उल्लेखनीय भएपछि समाजशास्त्रीले यसबारे अध्ययन गरे । अध्येताहरूले ‘बाबाडम’लाई महत्त्वपूर्ण सामाजिक घटनाका रूपमा बुझेर तिनको अन्तर्य केलाउन थाले । हजारौँ मानिस ‘गड–मेन’का अनुयायी बनेको घटना अध्ययनयोग्य विषय हो ।
यस्ता अध्ययनलाई उकेरा लगाउने चाहिँ सञ्चार माध्यममा भएका रिपोर्टिङ र पत्रकारले लेखेका पुस्तक नै हुन् । भारतमा आशाराम बापुका कर्तुत बाहिर आए । रामदेवको नाफाखोरी धन्दा उधिनेर पुस्तक लेखियो । साई बाबाका टुनामुना चिरेर तथ्य प्रकाशमा ल्याउने काम रिपोर्टिङमार्फतै भयो ।
धार्मिक अनुष्ठान र सम्प्रदायका आवरणमा बाबाहरूले राख्ने राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थका पर्दा च्यात्न सहज हुन्न । उपर्युक्तमध्ये कुनै गड–मेन कम प्रभावशाली थिएनन् । तिनका अनुयायीको संख्या गनेर साध्य थिएन । तथापि केही सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूले वास्तविकता उजागर गरेरै छाडे । अर्थात् पत्रकारिताबाट अपेक्षा गरिने सामान्य भूमिका निर्वाह गरे । असल पत्रकारिताले उधिनेका तथ्यका हाँगा समातेर गहिरो प्राज्ञिक अध्ययन सम्भव हुनसक्छ । नेपालमा तथ्य खोज्ने पहिलो उद्यम निम्छरो देखिएको छ ।
रामबहादुर बमजनलाई नेपाली सञ्चार माध्यमले तपस्वी ठहर्‍याएका थिए । नेपाल र भारतजस्ता मुलुकमा अलौकिकता खोजेर बेच्न पल्केका पश्चिमा माध्यमले तपस्वी कथ्यको प्रचार गरे । केही वर्षपछि उनै बमजन हत्यारा आरोपित भए । प्रहरीमा उजुरी पर्न थालेपछि बमजन–रहस्यका भिन्न पत्र उक्काउन थालियो ।
उनलाई बुद्धको नयाँ अवतार सावित गर्न उल्लेख्य शक्ति र स्रोत परिचालन भएको अन्दाज गरियो । पछिल्लो समय लागेको हत्या र अपहरणजस्ता आरोफबाट मुक्त राख्ने कोसिसमा शत्तिकेन्द्र लागेको हुनसक्छ । तथापि बमजनबारे नेपाली सञ्चार माध्यम चनाखो देखिन्छ ।
आफूलाई अनन्तश्री विभूषित मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमलनयनाचार्य नाम दिएका अर्का ‘बाबा’को प्रभाव पनि कम थिएन । राजा भइरहेसम्म ज्ञानेन्द्र शाहले उनलाई आफ्नै काँधमा बोके, राष्ट्रिय निकुञ्जमा मनलाग्दी गर्न छुट दिए । दरबारको न्यानोमा निष्कण्टक ‘ध्यान–साधना’ गरेका स्वामीलाई लोकतन्त्र कालमा नेपाली कांग्रेसले मलमलको गद्दीमा विराजमान गरायो ।
२०६९ चैतमा नारायणी किनारमा आयोजित महासमिति बैठकमा उपस्थित भएर उनले कांग्रेस नेतृत्वलाई आशिर्वाद दिए । महासमितिमा ‘बाबा–तमासा’ रचिएको धेरै समय बित्न नपाउँदै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को माओवाद बाबाको शरण पर्‍यो । लोकमानसिंह कार्कीले स्वामीकै प्रतापमा केही समय ‘शासन’ गर्न खोजेका थिए । सोझै राजतन्त्रको वकालत गर्दै धर्मयुद्धको घोषणा गर्न थालेपछि भने नेपाली सञ्चार माध्यमले उनका कर्तुत बाहिर ल्याए ।
आदित्य प्रकरणको सत्य बाहिर आउन धेरै समय लाग्न सक्छ । कारण, ‘वैश्य युग’को महिमा गाएर कहिल्यै नथाक्ने राजनीतिज्ञ, व्यापारी र पत्रकारहरू नै आदित्य–मन्त्रमा सम्मोहित छन् । यीमध्ये एकाध आदित्य–तिलस्मबाट साँच्चै प्रभावित भएका हुनसक्छन् ।
तिनले देखाउने भनिएको जादु–टुनामा विश्वास जाग्न थालेको सत्य हुनसक्छ । कोही आदित्य मार्गका इमानदार पथिक बनेर जीवन बिताउने निश्चय गरेका मानिस पनि हुनसक्छन् । कुनै राजनीतिज्ञ, पत्रकार वा व्यापारी आदित्यका भक्त हुन स्वतन्त्र छन्, तर त्यो उनीहरूको बिलकुलै निजी मामिला हुनुपर्छ ।
आम जनताले तिरेको करलाई अनुदानका रूपमा चलाउने प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सार्वजनिक महायज्ञमा जनताको स्वास्थ्यको ख्याल राख्छु भन्ने संस्था कुन हदसम्म संलग्न हुनसक्छ ? जनताले आधुनिक निर्वाचन पद्धतिमार्फत मतदान गरेर चुनेको प्रतिनिधिले ‘वैज्ञानिकतालाई चुनौती दिँदै’ तिलस्मी महायज्ञको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न कति मिल्छ ? सार्वजनिक चासोका सवालमा सूचना ल्याउन हिँडेको पत्रकारले सूचना र विश्लेषण लुकाएर तिलस्मको प्रोपगान्डा रच्न कति छुट पाउँछ ?
वैज्ञानिक एवं समाज वैज्ञानिक अनुसन्धानमा चरम उदासीनता देखाउने सत्ता र जिम्मेवार संस्थाले तिलस्म र अध्यात्मका आडमा गर्न खोजेको गेरुवा राजनीतिको वास्तविकता उजागर हुन्जेल ठूलो क्षति हुनसक्छ । वैज्ञानिक मानिएको मार्क्सवादको विश्वसनीयता अझै कमजोर हुनसक्छ, लोकतान्त्रिक विधि र संस्थामा भर गरिरहेको आलोचनात्मक नागरिक पंक्ति असान्दर्भिक ठहरिन सक्छ, समाजवादले संविधानको पानामै मृत्युवरण गर्न सक्छ, राजनीतिमा बजार र धर्मको घोलमात्रै बाँकी रहन सक्छ, सिंगो समाज निरंकुशता वरण गर्न तम्तयार देखिन सक्छ ।
यो बेहालको सबैभन्दा बढी जिम्मेवार तिनै हुनेछन्, जो केही दशकपहिले जमिनदारको टाउको काटेर जनवाद ल्याउन हिँडेका थिए र जसले भर्खरै आदित्यमणि महायज्ञमा नेपाली मार्क्सवादको विसर्जन गरेका छन् ।
प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:१८
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित/ https://ekantipur.com/opinion/2019/04/26/155624598786895344.html
'Media Populism vs Journalism'
समसामयिक विषयमा 'जनसवाल' कार्यक्रम
संसदीय अभ्यास, प्रतिपक्षको भूमिका र यसले गणतन्त्रल...
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका विषयमा हिमशिखर टेल...
समृद्धि के हो ? : बर्दिवास साहित्यिक सांस्कृतिक उत...
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका विषयमा रेडिय...
सावधान, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र !
बदनाम यो गणतन्त्र
दलीय भागबन्डाको घँटेसी